Fireehiwoot: "Miila koo dhabus, waan guddaa oolfadhee waan xiqqaa dhabeef hin cinqamu" - BBC News Afaan Oromoo
Fireehiwoot: "Miila koo dhabus, waan guddaa oolfadhee waan xiqqaa dhabeef hin cinqamu"
Image copyright Firehiwot Tamiru
Goodayyaa suuraa "Ijoollee koo balaa narra gahe hubachiisuun ulfaataa ture"
A.L.I bara 2006, xumura baatii Bitootessa galgala naannoo sa'aatii lama konkolaataa 'Doolfiin' jedhamee beekamu nama 13 fe'een Finfinnee irraa gara Adaamaa imalaa turte.
Guyyaa sana ganama gareen hojii fiilmiif magaalaa Adaamaa irraa gara Finfinneetti imale, waa'ee oolmaa isaanii haasawaa, kolfaafi taphataa gara Adaamaatti deebi'uutti turan.
Akkuma miseensota garee kanaa warra kaan Fireehiyoot Taammiruus dubartii ulfaa baatii saddeettii teessoo isa gidduurra ishee waliin teessee waliin haasawaa turte.
Haasawni fi taphni isaanii garuu magaalaa Moojoo akkuma darbaniin gadadootti jijjiirame.
Konkolaataan ittiin imalan daandii gadhiisee gara halayyaa fageenya gabaabaa booda jiruutti qaxxise.
Ariitiin deemaa waan tureef konkolaachisaan konkolaatattii to'achuu hin dandeenye, xiqqoo akka deemeen boodas ni garagale.
Balaa kana irraa lubbuun kan hafte Fireehiwoot, "balaa kanaan namoota hedduurra miidhaan gahe, buruquu, caba lafee fi madaa'uu qaamaati," jetti.
Mootummaan Gamtoomanii (UN) Dilbata dabre guyyaa miidhamtoota balaa tirafikaa yaadachuun ooleera.
Balaan caba lafee koronyoo ishee gajjallaatti isheerra gahe dhukkubbii cimaa itti uumee akka ture yaadatti.
Wayita balaan sun mudatetti, namoonni konkolaataa biroon duubarraan dhufaa turan dafanii waan dhaqqabaniif gara hospitaalaatti isaan geessuun lubbuu isaanii akka baraaranis dubbatti.
Hospitaala Adaamaatti miira naasuu keessa osoo jirtuu oduu rifaasisaa hakiimota irraa kan dhageesse.
"Ergan hospitaala Adaamaa gahee booda, hakimootni haala fayyaa kooti qoratanii, miidhaan narra gahe yaalamuu waan hin dandeenyeef, miili koo koronyoo gaditti muramuu akka qabu natti himan. Animmoo wayita sana waa'een miili koo muraamuu haa hafuutii, waa'ee yaalii naaf taasifamaa ture haalaan yaaduu hin danda'un ture. Lubbuun hafuu koo hin amanne, amma amma waanan du'u natti fakkaata ture. Bakka biraas miidhameeraa laata jechuun qaamakoon sakatta'a ture," jetti.
Goodayyaa suuraa Fireehiyoot wayita mana yaalaa turte, namoota ishee gaafachuu dhufan waliin
Fireehiyoot wayita sana Dhaabbata Raadiyoo fi Televijiinii duraanii amma OBNtti jijjiirame keessatti riippoortaraa fi oduu dhiyeessituu afaan Amaaraa turte.
"Miidhaan hamaan waan narra gahen se'e, miila koo natti hin fakkaanne ture. Achii booda haakiimichaan miila koo qofaa jedheen gaafadhe, eeyyee naan jennaan, ega akkas ta'ee kutii narraa gati lubbuun hafuun koo na gahan jedheen."
Murtichi salphaa hin turre garuu wayita sanatti miila ishee dhabuurra ijoollee isheef lubbuun turuun guddatee akka itti mul'ate dubbatti.
"Rabbitu nu baase malee osoo xiqqoo sigigaatee halayyaa seena ture, wanti baay'ee na ajaa'ibe ammoo dubartiin ulfa ji'a saddeetii na cinaa turte madaa salphaan alatti homaa hin taane, baatii tokko boodas nagaan deesse."
Yeroo balaan sun isheerra gahetti, ilmi ishee angafaa waggaa 6 inni xiqqaan ammoo reefu waggaa 1 ture.
Balaan isheerra gahe haala teessuma isheefi gosa kophee kaa'atteen hammaachuu akka hin oolle dubbatti.
"Kophee koomee dheera qabun kaa'adhe ture, miila koos diriirsee teessoo isa fuulduraa jala galcheen ture, wayita konkolaataan garagalu koronyoon koo teessoo keessa waan galeef cabe jedheen yaada."
Isheen duubarra waan teesseef hin dhagahiin haa haftu malee, warri fuuldura taa'an konkolaachisichi ariitii isaa akka hir'isu, darbees giddu gidduun wayita shillim jedhu itti iyyanii dammaqsaa akka turan boodarra dhagahuu ishee dubbatti.
Isheen abdii kuttee miili ishee akka citu murteessitus, maatiin ishee didanii yaalii biraaf gara Finfinnee fuudhanii deeman. Ta'us falli addaa hin argamne.
Miili ishee koronyoon gaditti murame.
"Yeroo mara maatiin guutuun balaa konkolaataan dhuman, haati ilmoo isheerraa gargar baate wayita jedhamu waanan dhagahuuf, duuti naaf hin hafu garuu balaa konkolaataan akka hin taane nan sodaadhan ture, ofin eegas ture. Fuuldura hin taa'u, yoo xiqqoo ariifatu suuta jedhi jedheen iyya, garuu waan naaf barreeffame jiraachuun waan narra jiruuf..."
Wayita miili ishee murame dhukkubiin dandamachuuf namatti ulfaatu ishee mudatee akka ture dubbatti.
"Jalqaba erga muramee booda, ispeeshaaliistiin dhufee, seeraan hin muramne, booda miila nam-tolchee fi kophee yoo kaawwattu si rakkisa waan naan jedheef, lammata baqaqsanii na yaalan."
Goodayyaa suuraa ''Akkamitti tarkaanfachuu akkan qabu baatii tokko oliif shaakalaan ture''
Amma Fireehiyoot balaa isheerra gahe yaadashuufi waan ishee dhabsiise yaaduu keessaa baate jireenya ishee idileetti deebitee jirti.
"Hanga madaan naaf qooruutti kiraanchiin deemaan ture, booda miili nam-tolchee qixa koon naaf hojjetamee, akkamiin akkan deemu ergan shaakalee booda gara hojii kootti deebi'een jira. Waanan duraan hojjedhu keessa wantin amma hin hojjenne hojii moodeliingii qofa, waan guddaa oolfadhee waan xiqqoo dhabeef cinqamuu hin barbaadu."
Poolisiin Toroontoo namicha konkolaataadhaan balaa gessise to'atan
Faransaayi seera godaantotaa cimaa raggaasifte
Paartiin Jarman durateessuu dubartii filate
Garee cimaa torban kanaa kan Gaarzi Kiruuksi baase
Tiraampi haasaa Iraan waliinii godhan cichuun akka itti fufan Maakroon wawwaatan